Ndụ gara aga na-emetụta ụdị mmadụ anyị bụ
1. Okwu mmalite nke akụkụ ime mmụọ nke uche
2. Ndụ gara aga na-emetụta uche a na-amachaghị ya na omume
3. Ike adịghị mma na-ewere dịka enyemaka ntụpọ omume ndị nọnyere anyị site na ndụ gara aga
Akụkụ nke ime mmụọ n’uche mmadụ bụ otu akụkụ nke dị mkpa iji ghọta nke ọma ihe mere ndị mmadụ dị iche iche ji enwe ike imeghachi omume n’otu ọnọdụ n’ụzọ dị iche. Ihe ndị mmadụ na-eme gbasara ọnọdụ nwere ike megide agwa ha mgbe ụfọdụ. Nke a bụ echiche amabeghị maka mmụọ ụbụrụ nke oge a, nke na-egbochi ike ya inyere mmadụ aka n’ezie.
Ya bụ kedu otu uche si enwe mmetụta site na akụkụ ime mmụọ?
Anyị enyela nkọwa zuru oke banyere otu uche anyị si arụ ọrụ na nkuzi ndị ọzọ, Iji nwee ghọta n’ụjụ, anyị na-akwado ịlele nkuzi ndị a:
Ọdịdị arụmọrụ nke uche
Ihe mere anyị ji eme ihe ndị anyị na-eme
Mmadụ nwere ọtụtụ akụkụ. Ha bụ anụ ahụ nkịtị, ike dị mkpa, uche, ọgụgụ isi, anụ ahụ dị omimi na mkpụrụ obi. Mkpụrụ obi bụ Ụkpụrụ Chineke nke dị n’ime mmadụ nile. Uche bụ ọdụ nke mmetụta anyị, mmetụta anyị na ọchịchọ anyị, ọ bụkwa otu n’ime ihe kachasị emetụta ụdị mmadụ anyị. Ihe mejụpụtara uche mmadụ dị ụzọ abụọ::
Uche amara: Ọ bụ akụkụ nke echiche na mmetụta anyị nke anyị maara maka ha. Otu ọ dị, nke a bụ naanị % iri nke uche anyị. Uche anyị a na-amachaghị na-achịkwa uche a maara kpatakpata. Ọ dị ka ihu ụlọ ahịa nyere uche a na-amachaghị.
Uche a na-amachaghị: Uche a na-amachaghị nwere n’ime ya ọtụtụ ihe ọmume enweghị ike ịgụ ọnụ ndị ekere ma ọ bụ megharịa site na ihe mere na ndụ a, yana na ndụ gara aga. N’ịmaatụ, mmadụ nwere ike inwe ọdịdị ịbọ ọbọ n’ihi echiche dị omimi nke mmegwara, nke e mepụtara ma sie ike site na ihe ndị mere n’oge gara aga na ndụ a ma ọ bụ na ọtụtụ ndụ gara aga.
Ọtụtụ n’ime anyị amaghị, na anyị nile ebiela ọtụtụ ndụ n’Ụwa. A na-amụ anyị ugboro ugboro (ịṅọ ụwa) iji kwụọ ụgwọ nke ndekọ inye na ịnara. Dịka otu anyị siri bie ndụ anyị na ndụ gara aga, na otu anyị siri were nkpacha anya anyị mee ihe n’ime nke ọ bụla n’ime ha wee kpụọ ụdị mmadụ anyị. Ụdị agwa echekwara dịka ihe omume n’ime uche anyị a na-amachaghị na-aga n’ihu na-akpụzigharị/sie ike site na omume anyị na echiche n’ime oge ndụ ọ bụla. Ọ bụrụ n’anyị ga-elele ndụ onye nkịtị gara aga ya na mmetụta ha na ntụpọ omume ya, ihe na-esote ga-abụ nha nke mmetụta.
Ndụ gara aga dị ka ihe na-eweta ntụpọ omume mmadụ
Ike dị ka na nnarị
Otu puku ndụ gara aga Iri anọ na itenaanị%
Ndụ asaa gara aga Iri anọ na itenaanị%
Ndụ ugbu a %abụọ
Mkpokọta %Otu nnarị
Ka anyị were ọmụmaatụ ntụpọ iwe nke mmadụ n’oge ndụ ya ugbu a. Dịka nwatakịrị eku na-aka n’onwe ya o nwere ike igosipụta iwe n’ụdị iwe ọkụ. Ọ dị mkpa iburu n’uche na ntụpọ nke iwe iwe amaliteghị na ndụ a n’onwe ya. N’ezie, ọ bụ echiche nke ewusiri ike ma dozie ya n’oge ndụ.
%Iri anọ na itenaanị nke ụdị iwe mmadụ ga-abụrịrị n’ihi otu mmadụ siri zụlite ntụpọ omume site na ịzaghachi n’iwe n’ọnọdụ dị iche iche na ndụ otu puku gara aga.Site na-anaghị arụsi ọrụ ike n’ibelata iwe, ọ gaara abụ na-ahapụrụ ya ka ọ bawanye na-enweghị oke n’oge ndụ.
Ndụ asaa gara aga gaara atụnye %iri anọ na itenaanị ọzọ nke ụdị agwa iwe mmadụ si esiwanye ike na uche a na-amachaghị.
Ya mere, n’oge ọmụmụ na ndụ ugbu a, ntụpọ nke iwe n’ime onye ahụ ga-abụrụla ihe gbanyere nnukwu mgbọrọ. Ka mmadụ na-ebi ndụ ugbu a, a ga-enwe ụfọdụ ọnọdụ ndị onye ahụ ga-enweta nke nwere ike ikpalite onye ahụ izaghachi n’iwe, ya bụ na-akpụ ma sie ike n’ụdị ntụpọ omume. Otu ọ dị, ụdị mmeghachi nke iwe ga-apụta naanị % abụọ nke etu ntụpọ omume nke iwe si malite na onye ahụ. N’oke etiti, iri itenaanị na asatọ % ọdịdị nke ntụpọ omume onye ọ bụla ga-abụrịrị n’ihi ndụ gara aga.
Echiche n’ihi echiche ndị dị na uche a na-amachaghị na-abịa oge nile n’uche amara site na izaghachi na ihe nkpalite sitere na mpụga ma ọ bụrụ na-enweghị mkpalite ọ bụla. Ka echiche mmadụ ndị na-adịghị mma na-esiwanye ike dịka iwe, ịkpọ asị na inwe anya ọkụ dị, otu ahụkwa ka echiche onye ahụ maara si enwe oge nile echiche ndị adịghị mma, nke na-ahapụ onye ahụ ebebe n’ọnọdụ nke adịghị mma na na-enweghị obi aṅụrị.
Uche a na-amachaghị nwekwara echiche nile achọrọ iji mezuo akara aka anyị n’oge ndụ anyị ugbu a. Ụdị echiche ndị a ka a na-agbakwunye na ebe ndekọ inye na inara, nke nwere n’ime ya ihe nile edere banyere omume akara aka n’ndụ onye ahụ (n’ihi ndụ gara aga). Dabere na ndekọ inye na ịnara nke onye ahụ ma ọ bụ akara aka, ebe ndekọ inye na inara n’uche na-akọwa etu mmadụ si azaghachi ma ọ bụ mmeghachi omume banyere ihe omume na ndụ na ọnọdụ. Akara aka bụ akụkụ ndụ mmadụ nke karịrị onye ahụ nchịkwa. Akara aka na-achịkwa obi aṅụrị na obi enweghị aṅụrị anyị ga-agafe n’ihi ihe ọma na ihe ọjọ (njọ) gbakọtara n’oge ndụ a ma ọ bụ oge ndụ gara aga. Site na nyocha ime mmụọ anyị chọpụtara na oke etiti iri isii na ise % nke ndụ anyị bụ akara aka n’oge ugbu a. Akara aka a mụrụ nyere anyị bụ ya bụ isi mmetụta gbasara ma anyị ga-enwe aṅụrị ma ọ bụ ihe mgbu. Otu n’ime ihe na-eweta uche mgbu na ndụ anyị (nke na-ekwe ka akara aka adịghị mma anyị pụta ihe) bụ n’ihi ntụpọ omume anyị.
Ya bụrụgodi na anyị enweghị ndekọ inye na inara na mmadụ, ntụpọ omume nwere ike ịkpalite omume ezịghị ezị nke na-enye ndị ọzị ihe mgbu yabụ na-emepụta nkwụghachị ọhụrụ na-adịghị mma ma ọ bụ ndekọ inye na ịnara na-adịghị mma. Ọ bụrụ na anyị na-enye ndị ọzọ enweghị aṅụrị mgbe ahụ dịka iwu nke mmegwara, anyị ga-agafe kwa ụdị enweghị aṅụrị ahụ n’oge ndụ ugbu a ma ọ bụ na ndụ ọdịnaihu.
Mgbe ọ bụla ike adịghị mma sitere na akụkụ ime mmụọ na-eji ntụpọ omume dịka enyemaka ha. Nke a bụkarịrị otu a maka ndị ike adịghị mma nwee. Ọ bụrụ na iwe mmadụ na-abụkarị ụzọ ise n’otu ọnọdụ, ike adịghị mma nwere ike mụba ya ruo ụzọ itenaanị ma ọ bụ iri ya bụ na-eme mmeghachi mmadụ gafee oke ọnọdụ ahụ ma mee okwu sie ike karịa otu okwesiri ịdị, N’ịmaatụ n’ezi ndọgha okwu n’etiti dị na nwunye, ike adịghị mma nwere ike iwere dịka enyemaka ntụpọ omume ha abụọ, meek a ha kwuo ihe ekwesịghị site na iwe bute mmebi ga-adịgide na mmekọrịta ha. Ntụpọ omume bụ adịghị ike nke uche (nke enwere ike inweta site n’ọtụtụ ndụ gara aga) nke ike adịghị mma nwere ike imetụta ma jisie anyị ike.
Isi okwu dị mkpa ịghọta ebe a bụ na ọ bụ karịa n’ihi ntụpọ anyị dị ka iwe na ọchịchọ, ka na-enwe n’ụjụ ihe mgbu nke e dere n’akara aka na anyị ga-agabiga. Nke a bụ site na ihe ọjọọ ma ọ bụ njọ ekpokọrọ site na ndụ gara aga ma ọ bụ na ndụ anyị ugbu a. Anyị nwerekwara ike imepụta ndekọ ọhụrụ adịghị mma maka ntụpọ omume anyị.